Sunday February 24, 2019 - 09:44:50 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Warbaahinta qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay xaqiijisay in hogaamiye Kim Jong-un uu u kicitimay shirka uu Vietnam kula yeelanayo Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump.
Warbixinn lagu baahiyay warbaahinta qaranka ee Kuuriyada waqooyi ayaa ah qirashadii ugu horeysay ee xukkumadda Pyongyang ay ku shaacinayso in shirka Hanoi uu dhici doono.
Socdaalkiisa waxaa la shaaciyay saacado uun ka dib markii tareen gaashaaman oo midabkiisu yahay cagaar iyo huruud uu ka gudbay xadka dalkaasi la leeyahay Shiinaha.
Safarka dalka Vietnam ayaa la filaya in uu qaato 60 saacadood. Waxaa la aaminsanyahay in safarka ay ku weheliyaan walashiis Kim Yo Jong, iyo mid kamid dadkii wadahadalada ugu qeybgalayay Jeneraal Kim Yong Chol.
Waxaa jirto hadal hayn sheegaysa in Mr Kim uu booqani doono xarumaha ganacsiga ee Vietnam shirka ka hor.
Donald Trump ayaa waxaa uu isku deyi doona in uu siiyo Kim kaalmo loogu talagalay in lagu kaabo dhaqaalaha dalkiisa ee sii liicayay hadii uu joojiyo barnaamijkiisa nukliyeerka. Shirka madaxeedkan labaad ee aadka looga dhursugayo ayaa waxaa uu dhici doona maalinta Arbacada.
Vietnam waxa ay leedahay mid ka mid ah dhaqaalaha sida wayn u kobcaya ee Aasiya
Maxaa Vietnam lagu doortay?
Vietnam oo ay maamulaan shuuciyiin balse dhaqaalaheedu uu hanti-goosadku yahay ayaa haatan waxaa loo arkaa inay saaxiib la tahay Washington iyo +Pyongyang.
Dalka ayaa waxaa haatan waxaa loo arkaa inuu yahay "goob dhexdhexaad ah" oo buuxin karo dhammaan shuruudaha ay doonayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu sheegayo Carl Thayer, oo khabiir ku ah arrimaha Vietnam oo uu saldhiggiisu yahay Jaamacadda New South Wales, ee dalka Australia.
Prof Thayer ayaa waxa uu u sheegay BBC-da laanta Viernam: "Doorashada Vietnam loo doortay inay martigaliso kulanka labaad ee Trump iyo Kim ma ahan oo kaliya mid xulasho un ku timid."
"Vietnam waxaa loo doortay in dhab ahaantii dhammaan dhinacyadu ay ku kalsoon yihiin awoodda ay u leedahay inay sugto ammaanka kulankaasi. Dhammaan dhinacyaduna waxa ay rumaysan yihiin in Vietnam ay tahay goob dhexdhexaad ah''.
Kim Jong-un iyo Donald Trump ayaa markii labaad kulmi doona 27-28 bisha Febraayo